VALVE BOLAS EXPERT
Baolina mitsivalana mitsingevana
Trunnion niakatra Valve baolina
Baolina misy valizy mihantona
Ball Valve matevina
Baolina kambana telo lalana
Ball Ball Valve mipetraka
V-Port Valve baolina
Ball Valve manokana
Ny famolavolana baolina valizy mitsingevana dia midika hoe peratra seza roa ampiasaina amin'ny fanohanana ny baolina amin'ny valizy baolina mitsingevana. Ity famolavolana ity dia mahatonga ny baolina hitsingevana na mihetsika amin'ny alàlan'ny peratra seza eo an-tampony. Ity famolavolana ity dia mifanaraka amin'ny valizy baolina kely sy ambany.
Ny valizy valizy lavaka dia azo atao amin'ny alàlan'ny lovia vy, na amin'ny fantsom-pohy ao anaty baolina. Ny Hollow Ball dia tsy lafo loatra satria tsy misy vy firy ao aminy, ary amin'ny habe lehibe kokoa dia handray anjara amin'ny fiainana seza tsara kokoa izy io satria ny lanjany maivana dia mampihena ny fipetrahan'ny seza mifandraika amin'ny lanjany.
Trunnion Valve baolina
Ny baolina valizy trunnion dia manana fotony hafa eo ambany hametrahana ny toeran'ny baolina. Izay no tsy hihetsika ny baolina. Ireo baolina ireo dia misy amin'ny seza malefaka ary koa ny metaly natao ho an'ny serivisy avo lenta na cryogenika.
Wenzhou Xinzhan Valve Ball Co., Ltd. (XINZHAN) dia mpanamboatra natokana ho amin'ny fampandrosoana ny valizy valizy haingam-pandeha sy haitao ary haavo marobe. Miaraka amin'ny fahaizany mamokatra famokarana mahery, traikefa fitantanana famokarana an-taonany maro, fanodinana mandroso sy fanaraha-maso (Western Siemens CNC fitaovana-spherical grinder, machining centre, boribory boribory fandrefesana fitaovana, telo-dimensional mandrindra fitaovana, sns), XINZHAN nahazo fankasitrahana ary fiderana avy amin'ny mpanjifa anatiny sy avy any ivelany.
Baolina avy any Shina
Ball Ball Valve Refrigeration
Koba valizy mitsingevana vy
Baolina misy lavaka ho an'ny valves Ball
Baomba 3 Valve Valve
Baola vita amin'ny valizy namboarina
Ball valve mitsingevana
Fampitahana ny fomba fanaovana stainles ...
1. Fomba filatsahana casting: Fomban-drazana io ...
Amin'ny maha orinasa manana traikefa 10 taona dia hiasa mafy kokoa izahay ary hanome anao vahaolana valin'ny manam-pahaizana momba ny baolina.
No. 2367, Binhai Eleventh Road, Wenzhou Economic & Technological Development Zone, Faritany Zhejiang, PR China
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra - Sitemap Ball Valve Parts , 304 Ary 304l Valve Ball , L Pattern Valve baolina , V miendrika Valve baolina Manufacturer , baolina Fa Valves , L Type Valve baolina ,